Maareeya Hay’adda Duulista Rayidka.“Duulimaadyada la hakiyay kaliya waxa uu saameynayaa isu socodka Dadweynaha” - Awdinle Online
Maareeya Hay’adda Duulista Rayidka.“Duulimaadyada la hakiyay kaliya waxa uu saameynayaa isu socodka Dadweynaha”
Maareeyaha Hay’adda Duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa faah-faahin ka bixiyay hakinta duullimaadyada Gudaha meelaha uu saameynta taban ku yeelanayo.
Waxa uu sheegay in kaliya ay joojiyeen dadka sida maalinlaha ah isaga kala gudba Muqdisho iyo Gobolada Dalka, waxaana uu meesha ka saaray in la hakiyay Gargaarka bani aadamnimada, Raashinka, Daawada, Qalabka Baabuurta iyo wixii lamid ah.
Maareeyaha Axmed waxa uu tilmaamay in Dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto kahor tagga Coronavirus oo kamid ah Cudurada Faafa, isla markaana saddex kiis laga helay Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Maanta waxaa dhaqan galay joojinta isu socodka duullimaadka dadka rayidka ah ee Muqdsho, Hir-Shabeelle, Galmudug, Puntland, Somaliland, Jubbaland iyo Koofur Galbeed oo shalay kasoo baxay Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada XFS.
Inta badan waxaa duullimaadyada la joojiyay adeegsada Mas’uuliyiin katirsan Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada, Ganacsatada, Dadka waayeelada ah, Kuwa Xanuunsan iyo shaqsiyaadka aan awoodin safarka dhulka.
Lama ogo waqtiga ay sii soconeyso Xayiradda duullimaadka Gudaha, waxaana loo joojiyay cabsi la xiriirta Feyruska Corona, waxaana ka horeysay tallaabo lagu hakiyay duulimaadyada caalamiga ah ee dalka.
Previous articleDiiwaan gelinta Musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka K/Galbeed oo maanta bilaabaneysa
Next articleDunida Kiisaska Laga Diiwaangeliyay COVID-19 Oo Kor U Dhaafay Nus Milyan.